Kava hanesorana - J & S Botanics
[Latina Name] Piper methyicium L.
[Famaritana] Kavalactones ≥ 30,0%
[Bika Aman 'endrika] Yellow vovoka
[Sombiny habeny] 80Mesh
[Net lanjany] 25kgs / drum
[Inona no atao hoe Kava?]
Kava, fantatra koa amin'ny hoe Piper methysticum, kava kava, ary 'Awa, dia mahantra kely teratany any amin'ny nosy tany Pasifika Atsimo. No Solofo sy vokatry natao ho tsy toaka, zava-pisotro psychoactive izay nampiasaina tsosialy sy fombafomba ho an'ny jatony taona tany Hawaii, Fidji, ary Tonga.
Kava dia nanomana fomba nentim-paharazana amin'ny alalan'ny fametrahana tany ny fakany, ary dia nirantsana ho porous kitapo, submerging amin'ny rano, ary voafehy ny ranom ho any amin'ny malalaka, sokitra, vilia hazo. Voaniho antsasaky ny akorany kaopy dia niara-nanatsoboka ary nofenoiny - totohondriny lovia fomba. Rehefa avy misotro kaopy iray na roa ny fahatsapana mainka fialam-boly ny saina miaraka manomboka tonga. Na dia mampitony, dia tsy toy toaka amin'izany hevitra mbola mazava. Ny tsirony dia inoffensive amin'ny ankapobeny, fa ny sasany mahita fa mitaky hatao nampiasaina; Tena miankina amin'ny safidin'ny ho an'ny dia tany tsirony.
[Kava azo antoka ny Ampiasao]
Ny azo antoka sy mahomby soa kava mba hanamaivanana famantarana ny fanahiana koa manohana ao amin'ny Meta-famakafakana, ny paika antontan'isa famerenana fito olona pitsaboana fitsapana nivoaka tamin'ny 2000 tao amin'ny Journal de Clinical Psychopharmacology, ary indray ao toy izany koa fanakianana famerenana tamin'ny 2001. ny hevitra tsy nahita voka vokatry manan-danja mikasika ny aty habetsahan'ny poizina.
Ho famaranana, ny aty dia vokatry ny zavatra maro, anisan'izany ny hitenenan'izay levitra levitra sy ny zava-mahadomelina, ary koa ny toaka, izay no tena mahatonga ny aty simba. Tokony ho fantatsika fa ny anana no azo heverina fanafody, mba ho raisina ny fanajana sahaza momba ny mety ho fifandraisana sy ny habetsahan'ny poizina, anisan'izany ny aty. Etsy an-danin'izany, ny sisiny Kava kava ny fiarovana lavitra mihoatra noho ny azy ny fanafody mitovy.
Kava ny dia afaka manampy offset maro ny olana, indrindra indrindra fihenjanana sy ny tebiteby, ary nandrava ny torimaso fomba. Na izany aza, ny anxiolytic kava (anti-tahotra na fanahiana manohitra ny mpandraharaha) sy ny fananana dia afaka mampitony offset maro hafa adin-tsaina sy tebiteby aretina mifandray.
1. Kava ho toy ny Fitsaboana ny fanahiana
2. Kava anie ny Vahaolana Menopausal Mood nitaredretra
4. Combat mampiketrona
5. niala tamin'ny sigara Fanampiana
6. Combat fanaintainana toy ny analgesic
7. mahita tory
Manaraka: Marigold nalaina
Citrus Aurantium hanesorana